Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Ngirozi huru -> Ngirozi nemadhimoni
Ngirozi nemadhimoni: [Ngirozi huru]
Kunyange Mikaeri mutumwa mukuru paaikakavadzana naDhiabhori, pavaiitirana nharo kuti ndiani achatora chitunha chaMosesi, haana kutaura namazwi okushora achimupa mhosva asi akati, “Tenzi ndiye achakupa mhosva.”
 Asi muchinda wenyika yePezhia aipikisana neni kwamazuva makumi maviri nerimwechete. Asi Mikaeri mumwe wamachinda makuru akauya kuzondibatsira naizvozvo ndamusiya ikoko nomuchinda wenyika yePezhia.” Ndauya kuitira kuti unzwisise zvichawira vanhu vokwako mumazuva anotevera, nokuti chiratidzo ichochi ndechamazuva ari kuuya. Paakanditaurira saizvozvi, ndakabva ndati uso pasi tsikitsiki ndokushaya kana neromuromo. Ndokubva mumwe akaita sevanakomana vavanhu andigunzva miromo. Ndakashamisa muromo ndikataura kune uya akanga amire pamberi pangu kuti, “Changamire chiratidzo chiya ichi chakonzera kuti ndive nokurwadziwa kwandava nako handichisina simba. Ini muranda wenyu ndingataure seiko nemi changamire? Simba randiperera ini, handichakwanisi kufema.” Uya uya wechimiro chinenge chomunhu akandibatazve akandisimbaradza. Akati, “Nhaiwe, munhu wapamwoyo chaiyechaiye, usatye, rugare ngaruve newe. Shinga utsunge mwoyo.” Paakataura kwandiri ndakabva ndasimbaradzwa ndokubva ndati, “Changamire chiregai nditaure nemi nokuti mandisimbaradza.” Iye ndokuti, “Zvandauyira kwauri unozviziva here? Asi iye zvino ndava kudzokera kundorwisa muchinda wePezhia. Ndikange ndapedza naye ndipo pachauya muchinda wenyika yeGirisi. “Asi ini ndichakutaurira zvakanyorwa mubhuku rechokwadi. Hakuna kana mumwe angabatsire ari kudivi kwangu kusiya Mikaeri muchinda wokwenyu.
“Panguva iyoyo ndipo pachamuka Mikaeri, iye muchinda mukuru anomiririra vanhu vokwako. Pachaita nguva yenhamo isati yambovapo kubvira pakatanga kuva norudzi rwavanhu kusvikira panguva yacho iyoyo. Asi nguva iyoyo munhu wose wokwako anenge aine zita richawanikwa rakanyorwa mubhuku, achanunurwa.
ndichitaura kudaro mumunamato, munhu uya, Gabhurieri wandakanga ndaona muchiratidzo pokutanga paya, akauya kwandiri achibhururuka semhepo kumhanya panguva yechibayiro chamanheru.
 Kanyanga ikako kakazvitutumadza zvokutosvika kunyange nokuJinda regurusvusvu. Zvokupira kwaari mupiro wokupisa unogaroitwa zvikaregerwa uye Nzvimbo yake Inoera ikakurirwa. Ipapo gurusvusvu riya rakaiswa mumaoko mayo pamwechete nomupiro wokupisa pamusana pouipi. Chokwadi chakakandwa pasi, nyanga iyoyi ikaita zvayaiita zvikabudirira. Ndakanzwa mumwe anoera achitaura ndokubva mumwewo anoera abvunza uya akanga ataura kuti, “Ko izvo zvechiratidzo chomupiro wokupisa unogaroitwa izvi nezvokumbosiya zvakadaro Nzvimbo Inoera negurusvusvu racho zvichitsokodzerwa zvazvo netsoka, zvichapedza nguva yakadii?” Iye ndokuti kwaari, “Zvichapedza zviuru zviviri zvina mazana matatu amanheru namangwanani, Nzvimbo Inoera ndipo paichazochenurwazve yoita chaizvoizvo zvainofanira kunge yakaita.” Ini Dhanieri pandakaona chiratidzo ichochi ndakatvsaka kuti ndichinzwisise ndiye vhu kumira mberi kwangu mumwe aiva nechimiro chinenge chomunhu. Ndakanzwa izwi romunhu pakati pamahombekombe maviri aUrai richidaidzira kuti, “Gabhurieri tsanangurira munhu uyu anzwisise chiratidzo ichi.”
 Mudenga makamuka hondo Mikaeri navatumwa vake vachirwisa zigaranyanya riya. Zigaranyanya navatumwa varo rakarwisawo. Zigaranyanya navatumwa varo rakakurirwa; pakanga pasisina nzvimbo yavo kudenga. Zigaranyanya guru riya rakakandidzirwa pasi, ndiyo nyoka iya yapasichigare inonzi Dhiabhori kana kuti Satani munyengedzi wapasi pose. Akakandidzirwa pasi; vatumwa vake vakakandidzirwawo pasi pamwechete naye.
 Joshuwa paakanga ava pedyo neJeriko, akatarisa akaona mumwe murume amire mberi kwake muruoko rwake aiine bakatwa rakazvomhorwa muhara. Joshuwa akamuvinga akamuti, “Ko iwe uri wedu here, kana kuti uri mumwe wavavengi vedu?” Iye akati, “Kwete. Asi ndauya somutungamiriri wehondo yaTenzi.” Ipapo Joshuwa akati pasi zvambarara, achimuremekedza achiti, “Changamire, chiiko chamunoda kutaura neni muranda wenyu?” Mutungamiriri wehondo yaTenzi akati kuna Joshuwa, “Bvisa shangu mutsoka dzako nokuti paumire inzvimbo inoera,” Joshuwa ndokuita saizvozvo.
“Nyatsoonai kuti hamushori mumwe wevaduku ava nokuti ndinokutaurirai kuti kudenga vatumwa vavo vanogara vachiona uso hwaBaba vangu vari kudenga.
Ipapo mutumwa waTenzi akazviratidza ari murimi romoto raiva mugwenzi. Mosesi akatarira akaona kuti gwenzi raibvira moto, asi rakanga risingaroti.
Nokuti pakumuka kwavanhu kubva kuvafi, havazoroori kana kuroorwa. Asi vanenge vaita savatumwa vokudenga.
Zvino nerimwe zuva zvakazoitika kuti vana vaMwari vakauya kuzozviratidza pana Tenzi. Satani akauyawo ari mukati mavo.